Kulankii BF ee maanta oo la baajiyey - Maxaa is-bedelay? - Caasimada Online
Home Warar Kulankii BF ee maanta oo la baajiyey – Maxaa is-bedelay?
Kulankii BF ee maanta oo la baajiyey – Maxaa is-bedelay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Qoraal kasoo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya, loona kala diray xildhibaanada, ayaa lagu ogeysiiyay in la baajiyay kulankii maanta oo Isniin ah loo balansanaa.
Fariinta loo kala diray xildhibaanada golaha shacabka ee muddo xilkeedkiisa dhamaaday ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay kulankaasi ilaa maalinta Arbacada ahm sida ku cad farintaasi.
“Mudane Xildhibaan shirkii beri oo Isniin ah ee loo balansanaa waxaa uu dib loo dhigey maalinta Arbacada ee tariikhdu ku beegan tahay 31 March,” ayaa lagu yiri fariinta loo kala diray xildhabaanada.
Sida wararku sheegayaan arrintaan ayaa ka danbeysay kadib markii cadaadis xooggan la saaray Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanka ee muddo xileedkoodu dhammaaday.
Diblumaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka ayaa saacadihii u danbeeyay wada hadallo dhinaca muuqaal araga fog iyo taleefano kula xiriirayay Farmaajo iyo Mursal si loo joojiyo kulanka baarlamaanka, waxaana heshiis lagu gaaray in kulanka Isniinta la baajiyo.
Ilo ku dhow wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in safiirrada Mareykanka, Midowga Yurub, Ingiriiska iyo wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan ay Mursal uga digeen in haddii uu goluhu qaato go’aan mudo kororsi ah, faa’iidada laga dhaxlo ay noqon doonto mid wiiqda xasilloonida dalka iyo dadaaladii dowlad dhiska ee socday sanadahaan.
Hakinta shirkaan ayaa la sheegayaa iney qeyb ku leeyihiin madaxda Mucaaradka, Jubbaland iyo Puntland oo si weyn u diidan qorshaha Farmaajo ee xildhibaanada qaar ay sheegeen in lagu sameysanayo muddo kororsi..
Dhinaca kale xildhibaanada kasoo horjeeday kulankaasi oo la sheegay in mudo xileedka Farmaajo loogu kordhin lahaa hadii uu qabsoomi lahaa ay sheegeen in xaalada siyaasadeed iyo mida amni ay noqon laheyd mid waji cusub yeelato, mas’uuliyadeedana uu qaadi lahaa Maxamed Mursal iyo Farmaajo sida ay hadalka u dhigeen.